ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ကြင်နာခြင်းတ၀က်၊ ရယ်မောခြင်းတ၀က်”
လက်စွဲတော် ဓါတ်ကြမ်းကြီး ပြန်လှန်ပြီးတော့ ရာဇဝင်ပြန်လှန်မယ်ပေါ့..ဒါကြောင့် သူများတွေပြော ကြတာကိုး “ကိုပေါ” ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်အရေးအသားနည်းနည်း မှီငြမ်း ကိုးကားစာတွေကများများ
(စာမနာဘူး တို့ H5N1 ဖြစ်နေပီတို့, ဘိုကလေး ဖက်သွားပီး ဝမ်းစာမပြည့်ဘူး .မဟုတ်လား တို့) ရိုးးးဟိုးးးဟိုးး
Yeah.. that's right , paw bawhtee.. you are absolutely right... Take time to realized...
Shame on you, Man.. just admit yr mistake otherwise we will name you, SAYAR GYI Paw FinKhung from RIT..
သြော် လက်သစ်တဲ့ လာသေးတယ် ကြင်နာခြင်းတ၀က် ရယ်မောခြင်းတ၀က် တဲ့ ဟာဟ
YIT ex-students said...
Pls think about urself!
I have never heard of YIT ex-students. :-)
ဘလောက်ရေးခြင်းရဲ.ရည်ရွယ်ချက်က "ငါမှသိ ၊ ငါမှတတ် ၊ ငါ့ကို ဝေဖန်ရင် နည်းနည်းမှသည်းမခံ ၊ ငါနဲ.အမြင်မတူရင် ငါ့ရန်သူ ၊ ငါရေးချင်တာငါရေးမယ် ၊ ဘလောက်လာဖတ်တဲ့ ပရိသတ်ကို စော်ကားရရင် ငါ့အတွက် အမြတ်" ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ.ရေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမှပြောနေစရာမလိုတော့ပါ ။ ရှေ.ဆက်ပြီးဒီလိုပို.စ်မျိုးများများရေးနိုင်ပါစေလို.ဘဲဆုတောင်းပေးတယ် ငပေါရေ ။ ငါးစိမ်းတန်းသွားပြီး ငါးစိမ်းရောင်းစားရင်တော့ သေချာပေါက်ကြီးပွါးမှာပါ ။
ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် မင်းရဲ.အရင်ပို.စ်ကလည်း လာဖတ်တဲ့ပရိတ်သတ်ကို ဆဲတာထက်တောင်ဆိုးပါသေးတယ် ။
လျှော့လျှော့...........ငပေါ...........ဘဝင်လေးကို လျှော့.......။ တကယ့်ကိုစောက်ကျိုးနည်းကောင်ပါလား။ RIT ကနေပြီးလာတဲ့ကောင်တဲ့ကွာ ။ ကျောင်းတော်ကြီးရဲ. ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ဒီလိုနည်းတွေနဲ.ပြန်ဆပ်နေတယ်ထင်ပါ့။
နိင်ငံတော်အာဏာ ..ငပေါလက်ထဲရောက်ရင်....အမလေးလေး.. တွေးရဲဘူး..
ကျနော့ ကိုေ ပါ..ကိုပေါ ။
လက်ရှိ စင်္ကာပူမှာ နေထိုင်တယ်။
Pls let me copy ur comment because i can not type Myanmar Font. I also want to say Nga Paww same as you.
Hayyyyyyyy! Nga Paw
U should think about urself!
စိတ်ထွက်ပေါက်လိုနေတယ် ဟဲဟဲ ဆဲချင်လို့ကို လာဆဲတာ
ကိုပေါ ဒါဆို ကိုပေါပုံ မျက်နှာရူးကြီးဖြစ်နေမှာပဲ ဟဲဟဲ မြင်ယောင်ကြည့်တာပါ တ၀က်က ရယ်ပြီး တ၀က်က တည်နေရင် ထူးဆန်းပါပေ့ ကိုပေါရေ
ကိုပေါ ကိုပေါ တရားရပါတယ် ကိုပေါရယ် ကိုပေါစာတွေဖတ်ရတာ တကယ် တကယ်
Blogger တွေ မျက်မာန်ရှတယ်
ကိုပေါရေ ဟေ ကိုပေါလား ၀ါး ကိုပေါဖင်မှာ ယင်ခေါင်းနား ဟွားး
(ကိုပေါ ဂုဏော အနန္တော.....)၃
နမော တောက်တဲ့ ဘဂဝါ့ကြွက် သန်မာသန်မုတ် ကိုပေါ"------" ခိခိခိခိ
အော် မှားလို့ မှားလို့ ကိုပေါပါးစပ်နဲ့ ဖင်နဲ့မှားသွားတယ် ဘလော့ဂါ ပေါက်စမို့ပါအေ ဘလော့ဂါ ပေါက်စမို့ပါ
ဖွီ ဖန် ဖွီ ဖန်
Mr. Paw is really paw. Paw tar, par taw. Par taw, paw tar.
post ကောင်းကောင်းတင်လေဗျာ ဒီမှာ အော်ရတာ ပလိန်းကြီး အဟဲ ချက်နဲ့ လက်နဲ့ တင်နဲ့ ငြင်းချင်လို့ပါဗျ
paw pawter pawtest said...
အမှတ် ၂ မလာတေးဘူးလား... (ပျော်လို့.)
ဟုတ်သားပဲ - အမှတ် ၂ , အမှတ် ၂ , ဖတ်ချင်လှပီ. ခိခိ ခစ် ခစ်
You guys are having freedom of expression here. Does anybody here notice that you are not debating based on facts and grounds, instead practicing vulgarity?
အရေခွံထူတယ်.. သူများထက်ထူးတယ်.. ပုံမှန် မဟုတ်ပဲ ဖောက်ထွက်တွေးတောရမယ်..... များများဝိုင်းဆဲ ကြလေ အောင်မြင်လေလို့ သတ်မှတ်တယ်.. ဆိုးဆိုးကောင်းကောင်း လူတစ်ရာမှာ ငါ့လိုလူ တစ်ယောက် မရှိဘူး.... လို့ လို့ လို့..... ယုံကြည်ပြီး ပျော်ပျော် လျှောက်လှမ်းနေ သော ကိုပေါသို့.. အထက်ပါအချက်များနှင့် တသွေမတိမ်း ကိုက်ညီသည်မှာ..... ဘာတဲ့... အရေခွံ အတော် ထူတဲ့အကောင်လေ..... (ဘယ်လောက်ထူ လည်းဆို နေလှမ်းပြီး ဗုံတီးလို့ရတယ်တဲ့..) သူများထက်လည်းထူးတယ် (ခြေလေးချောင်းကြီးနဲ့...) ဖောက်ထွက်တွေးတယ်.. (၃၆၀ ဒီဂရီ ရောက်တိုင်း ကမ္ဘာကို တပတ်ပတ် မိပြီ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ဆီကြိတ်သတဲ့).. များများဝိုင်းဗျင်းလေ အောင်မြင်လေပဲ .. ( ကြိမ်လုံးနဲ့ ရိုက်လိုက်တိုင်း ၀ုန်းကနဲ ထခုန်ပြီး အားကုတ် ထုတ်တယ် ဆိုပဲ)... လူတစ်ရာမှာ ငါ့လိုလူ တစ်ဟောက်မှ မရှိဘူး.. (ဘယ်ရှိမလည်း လူမှမဟုတ်တာ.. ဟိုဟာလေ.. နငယ်ဝဆွဲ ရေးချ ၀စ်စနှစ်လုံးကို ပေါက် မြောက် သွားတဲ့ သူပေါ့... (ရိုင်းသွားပြီလား တတ်နိုင်ဘူး သူရိုင်းကိုယ်ရိုင်းပဲ) သူက အများကြီးကို ရည်ရွယ်ပြီးရိုင်းတာ .. ကိုယ်ကတစ်ယောက်ထဲကို ရည်ရွယ်ပြီးရိုင်းတာ.... ခွိ.. ပျော်စရာကြီး..
ပေါကြီးကို မထိနဲ့ကွ။ ခေါင်းစဉ်ကိုက
ဖြစ်လာမယ့် ချာတိတ်က အပျိုကြီးလေလည်တာကို
အပြတ်ခံစားပြီး လက်တန်း စာဖွဲ့လိုက်တာ
ကျုပ်ရဲ့ ဟီးရိုး ဂျောက်ဂျက်တောင် ဆလံသရမယ်။
ဒါကိုမခံနိုင်တဲ့ ကစားဖော်သူငယ်ချင်းက အစ်မထိတာနဲ့
မင်းအစ်မ အပျိုကြီး အီးညှစ်တာ ကို
အော်ကြီးဟစ်ကျယ် စာဖွဲ့တာ၊ ဖွဲ့တဲ့သူ
အပြစ်လား။ မနေနိုင်မထိုင်နိုင် လေလည်မိသူမှာသာ
အပြစ်ရှိပါတယ်လေ။ မယုံရင် မျိုးမြင့်မောင်ကိုမေးကြည့်ပါ။
ဟိုက ဗန်းမော်ဆရာတော်ဖြစ်လာမယ့် ချာတိတ်မို့လို့သာပေါ့
သူ့အစ်မ စအိုတွန် တယ်လို့ တကယ့်ကို ထိထိမိမိ
ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း
ဒါမျိုးစာပေတွေကို ရှာရှာဖွေဖွေ သူ့နေရာနဲ့သူ
ကွက်တိ အသုံးချနိုင်တာ၊ ဒို့ ပေါကြီး မို့လို့သာပေါ့ကွာ။
အခုတော့ မင်းတို့ ဆဲတဲ့လူတွေအားလုံးလဲ ငစွန်လက်သစ်လေးတွေဖြစ်။ ပေါကြီးလဲ ဗန်းမော်ဆရာတော်လက်သစ်ဖြစ်။
ကဲ ကြည့်စမ်း၊ နှစ်ကောင်စား ကင်းပေါက်ကွာ။
ပေါကြီးမို့လို့သာပေါ့။ ပေါကြီးရဲ့ စာဖတ်အားကိုမြင်ကြပြီ
မဟုတ်လား။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဗန်းမော်ဆရာတော် တို့ကို အသာထား ဗုဒ္ဓ ကိုတောင်ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆွဲထဲ့ ကိုးကား နိုင်တဲ့ ပေါကြီးပါ။
Ko Paw isavery very clever guy.
Plenty anonymous came and listened under the Ko Paw's control without knowing themselves.
Bravo Ko Paw (with sharp claws).
အန်ကယ် Bino က Follower လုပ်မယ်ဆိုတော့
“FreeThinker” (ဘာသာမဲ့) ပေါပေါ ရမ်းပီပေါ့ဗျာ..
Thanks. Wishing youapleasant trip. :-)
stupid paw , Aung San and Bino...
Binoက ခင်ဗျား ဘလေ့ာ လူစည်အောင် အောက်လမ်းနည်းသုံးမနေပါနဲ့ဗျာ... ကိုယ့်သိက္ခာကိုယ်ထိန်း.. အမှန်ဟာ အမှန်ပါပဲ.... မျက်စေ့မှိတ်ငြင်းတိုင်း စင်ပေါ်ရောက်ရင် မြန်မာတွေ နဖားကြိုးထိုးဘို့ပဲရှိတော့တယ်.... ထွီ...
ကိုပေါ လုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ကိုထားလိုက်ပါဦး... ခုလောလောဆယ် သူရေးနေတဲ့ပို့စ်တွေကို ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ကတယ့်ကျပ်မပြည့်တဲ့ လူတယောက်ဆိုတာ သိသာနေပါတယ်... အဲတာကို အနောနီးမတ် အနော်နီးမတ် အော်အော်ပြီး ကဲ့ရဲ့နေတဲ့... မဟာပြင်ညာရှင် များကို ပိုအံ့သြပါတယ်..
It's myanmar in singapore...